Digital Patrika – चक्रे मिलनकी श्रीमतीले मुद्दा हाल्दा दीपक मनाङगेको सांसद पद चट
चक्रे मिलनकी श्रीमतीले मुद्दा हाल्दा दीपक मनाङगेको सांसद पद चट
Jan 22, 2018digitalpatrikaडिजिटल खोजी, समाज0
काठमाडौं । गुण्डा नाइकेका रुपमा कहलिएका दिपक मनाङ्ग अर्थात राजीव गुरुङ जो हालै प्रदेश सभा सदस्यमा मनाङबाट निर्वाचित भएका थिए । राजीव गुरुङ भन्दा पनि दिपक मनाङ्गेकै नामले चिरपरिचित अब उनको पद भने जाने भएको छ ।
काठमाडौँमा गुण्डाराज स्थापित गरेको आरोप लाग्दै आएका र बारम्बार प्रहरीको कष्टडी यात्रा गरेका यीनी केही समयदेखि गुण्डागर्दीबाट ओझेल परे । गुण्डागर्दी विरुद्ध प्रहरीको अपरेसन र इन्काउण्टरले यीनको गुण्डागर्दी अस्ताएको थियो ।
गुण्डागर्दी छोडेर राजनिती थालेका मनाङ्गे पछिल्लो समय एमालेको सहयोगमा मनाङबाट प्रदेशसभामा उमेद्धार बन्ने बने । यो हल्ला संगै एमालेभित्रै केही विरोध भएपछि मनाङ्गेलाई एमालेले टिकट दिएन र मनाङ्गे स्वतन्त्रबाट प्रदेशसभाका लागि चुनाव लडे र जीतेपनि ।
चुनावमा उमेद्वार बन्दा होस् या च्नाव लड्दा र जीत्दा पटक पटकका विवादका वीच उनले निर्वाचन कार्यालयबाट जीतको प्रमाणपत्र पनि लिए । संगै केही मिडियामा देखा परेका उनले आफु विलकुलै समाजसेवी भएको जीकीर गर्दै आएका थिए ।
र माघ ७ गते सरकारले प्रदेश सांसदको सपथको मिति तोक्यो । सबैतिर प्रदेश सांसदहरु बडो उत्साह र उमंगका साथ सपथमा उपस्थित भए तर मनाङ्का प्रदेश सांसद दिपक मनाङ्गे सपथका लागि उपस्थित भएनन् ।
कारण, अब मनाङ्गे जुनसुकै बेला पनि पक्राउ पर्न सक्नेछन् । पुरानो मुद्दा अर्थात् १२ बर्ष अगाडी गुण्डा नाकइके चक्रेमिलनलाई खुकुरी प्रहार गरेको मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेसँगै उनको सांसद पद समेत गएको छ ।
यसकारण सांसद पद गयो ?
२०६१ साल बैशाख ३१ गते मिलन गुरुङ भनिने चक्रे मिलनलाई मनाङेगको समूहले आक्रमण गरेको थियो । गुण्डा नाइकेका रुपमा कहलिएका चक्रे मिलनको समूहमा हिड्ने व्यक्तिलाई मनाङ्गेको समूहले खुकुरी प्रहार गरेको आरोप लगाइएको थियो । त्यसरी खुकुरी प्रहार गरे पछि चक्रेको टाउकोमा गम्भीर चोट लागी हात समेत चुडिएको उल्लेख गरिएको छ । सो घटनामा जोडिएका मनाङ्गेलाई पक्राउ गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीस नारायणप्रसाद दाहालको इजलाशले मनाङ्गेलाई दुई वर्ष कैदको फैसला सुनाएको थियो भने गणेश लामा, रेवत कार्की, रमेश सुनुवार र उमेश लामालाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो ।
सो फैसलामा चित्त नबुझाई सरकारी पक्षले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, पाटनमा पुनरावेदन गरेको थियो । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीशद्धय एकराज आचार्य र रामचन्द्र यादवको संयुक्त इजलाशले जिल्ला अदालतले कुटपिटको ६ नम्बर ले दुई बर्ष कैद सजाय नमिलेको हुँदा मनाङगेलाई ज्यान सम्बन्धी १ र १५ नम्बरको कसुर बमोजिम ५ बर्ष कैद हुने फैसला सुनाएको थियो भने गणेश लामा, रेवत कार्की, रमेश सुनुवार र उमेश लामालाई सफाई दिएको थियो ।
२०६९ साल साउन २८ गते भएको यो फैसलालाई सकारी पक्षले चिन्त बुझाएन । र फसाई पाएका गणेश लामा, रेवत कार्की, रमेश सुनुवार र उमेश लामालाई पनि कैद हुनु पर्ने माग गर्दै सरकारी पक्ष फेरि सर्वोच्च अदालत पुग्यो । केही दिन अघि मात्र सर्वोच्च अदालतले पनि कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दीपक मनाङ्गे पुनरावेदलन अदालतबाट भएको ५ बर्ष कैदलाई यथावत राख्दै गणेश लामा, रेवत कार्की, रमेश सुनुवार र उमेश लामालाई सफाई दियो । न्यायाधीशद्धइ दीपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले २०६९ साल साउन २८ गते भएको पुनरावेदनकै फैसला सदर गरेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालत र तत्कालीन पुनरावेदन अदालत दुवैले गरेको फैसलाविरुद्ध मनाङ्गेले पुनरावेदन गरेका थिएनन् । उनी काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको फैसला बमोजिम २ वर्ष कैद बसिसकेको देखिएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतका अनुसार मनाङ्गे अव उनी ३ वर्ष कैद बस्नुपर्ने भएको छ । कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेको, ज्यान मार्ने उद्योगमा आरोप प्रमाणित भइसकेका मनाङको सांसद पद जितकेको भएपनि कायम हुँदैन ।
आइतवार मनाङ्गे विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतले राखेको लगत प्रहरीले जानकारी पाइसकेको छ । लगतको जानकारी प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो सिआइवीले समेत जानकारी लिइसकेको छ । आइतवारदेखि नै मनाङ्गे जुनसुकै बेला पनि पक्राउ पर्न सक्ने प्रहरीले जानकारी दिएको छ । नेकपा एमालेको समर्थनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको रुपमा चुनाव जितेका मनाङे संविधानको धारा १७८ बमोजिम फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भएका छन् । अब उनको प्रदेश सभा सदस्य पद पनि खारेज भएको छ ।
अदालत र आयोगको असावधानीको पराकाष्ट
हालै मनाङबाट प्रदेश सांसद बनेका गुण्डा नाइके दिपक मनाङ्गे अन्नत जेल जाने निश्चित भएको छ । जस संगै उनको सांसद पद पनि गुम्ने निश्चित भएको हो । ज्यान मार्ने उद्योग मुद्धामा फैसला भई सजाय तोकेका ब्यक्ति उपर कसरी प्रदेशसभा सांसदको टिकट दिइयो ? र अदालतको फैसला कार्यान्वायन किन यतिन्जेलसम्म गुपचुप रह्यो ? अहिले यो प्रश्न उब्जिएको छ ।
जानाजान अपराधिक पृष्ठभुमीको ब्यक्तिलाई प्रदेश सांसदका लागि टिकट दिएर निर्वाचन आयोगले गम्भीर गल्ती गरेको देखिएको छ । आयोगले मनाङ्गेलाई टिकट दिएर गल्तीमात्र गरेर जीतसंगै प्रमाणपत्र समेत थम्याएर लज्जास्पद काम गरेको छ ।
गुण्डा नाइकेको उपमा पाएका मनाङे निर्वाचनको मैदानमा उत्रने कुराले उती बेला नै सबैलाई सशंकित बनाएको थियो । एमालेबाट चुनाव लड्ने हल्ला चलेपनि पछि उनले स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका थिए । अन्तमा उनले चुनाव जितेरै छाडे । जिल्ला निर्वाचन कार्यलयले उनलाई प्रमाण पत्र समेत दिईसकेको छ । तर उनी आइतबारको प्रदेश सांसदहरुको सपथ ग्रहणमा भने उपस्थित भएनन् ।
पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला सर्वोच्चले सदर गरेसँगै उनी फरार भएका छन् । र अहिले प्रहरीको खोजी सुचिमा सांसद तथा गुण्डा नाइके मनाङ्गे रहेका छन् ।
अदालत पनि चुकेकै हो त ?
यत्तिका वर्षसम्म पनि मनाङेको फैसला कार्यान्वयन गर्न अदालत पनि गम्भिर भएको देखिएन । पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसलालाई चिन्त बुझाएर मनाङे बसेको देखिएको । ५ बर्ष ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा फैसला भएका व्यक्तिले स्वयम्ले पुनरावेदन नगरेको अवस्थामा उनलाई पक्राउ गर्न सकिने कानुनी पाटो खुल्ला भएपनि उनी पक्राउ परेनन् बरु खुलेआम चुनावी सभा, सम्मेलन गर्दै हिडे तर सर्वोच्चबाट फैसला सदर भएसँगै उनी फरार छन् । यसरी अदालत र निर्वाचन आयोगको कमजोरीका कारण मनाङेले टिकट मात्र पाएनन् जनताबाट निर्वाचित समेत भए । तर प्रदेश सांसदको नियम अनुसार अब उनको पद भने रिक्त भएको छ ।